iPhone Mpịakọta bọtịnụ-adịghị arụ ọrụ? Lee ihe The Real Idozi! - Iphone
iphone 5 ịchọghị ọrụ
otu esi enweta ipad nkwarụ
iphone 6 na -edozi ndụ batrị
kedu bọtịnụ ụlọ na ipad m
ihuenyo iphone m gbara oji mana ekwentị ka na -arụ ọrụ
iPhone Mpịakọta bọtịnụ-adịghị arụ ọrụ? Nke a bụ The Real Idozi!
Igodo olu dị na iPhone gị agaghị arụ ọrụ ma ị maghị ihe kpatara ya. Da na-egwu oke nro ma ọ bụ oke ụda ma ọ na-amalite na-akụda mmụọ. N’isiokwu a, aga m eme ya kọwaa ihe ị ga-eme mgbe bọtịnụ olu iPhone gị anaghị arụ ọrụ !
Bọtịnụ ndị ahụ agbachila, ka ị nwere ike ịpị ha?
Ndị a bụ ajụjụ mbụ ị ga-ajụ onwe gị mgbe bọtịnụ olu iPhone gị anaghị arụ ọrụ:
Ndị bọtịnụ ahụ agbachiala ka ị ghara ịpị ha ma ọlị?
Nwere ike pịa bọtịnụ ahụ, mana ọ nweghị ihe mere na ihuenyo ahụ?
Nsogbu ọ bụla nwere usoro usoro nchọpụta nsogbu pụrụ iche, yabụ, m ga-agbaji edemede a site na ịlele ọnọdụ mbụ na mbụ, na ọnọdụ nke abụọ.
Jiri Mpịakọta Mpịakọta Na Mwube Ntọala
Ọ bụ ezie na ahụ gị iPhone olu bọtịnụ na-adịghị arụ ọrụ, ị nwere ike mgbe niile ịgbanwe olu ringer na Ntọala ngwa. Gaa na Ntọala -> undsda & Haptics . Iji dozie olu ringer, jiri mkpịsị aka dọrọ ihe mmịfe ahụ.
N'ihu gaa n'ihu ịdọrọ ihe mmịfe ahụ, ọ ga-adị jụụ iPhone gị ga-akụ. N'ihu n'ihu ị na-adọkpụ ihe mmịfe ahụ, ọ ga-ada ụda karịa. Mgbe ị dọrọ ihe mmịfe ahụ, mmapụta ga-apụta na etiti ngosipụta iji mee ka ị mara na agbanweela olu ringer.
Ngwa ndị na-akpọ egwu, pọdkastị, ma ọ bụ vidiyo ga-enwekwa ihe mmịfe ị nwere ike iji wee gbanwee olu ya. Dịka ọmụmaatụ, ka anyị lelee ngwa egwu. Na ala ala ihuenyo ahụ, ị ​​ga-ahụ ihe mmịfe dị larịị ị nwere ike iji dozie olu nke egwu ị na-ege! Ngwa pọdkastị na ngwa vidio vidio kachasị amasị gị ga-enwe nhazi yiri nke ahụ.
enyemaka gọọmentị iji zụta ụlọ
My iPhone Mpịakọta bọtịnụ Nọgidesiri!
O di nwute, ọ bụrụ na bọtịnụ olu dị kpam kpam, ọ nweghị ọtụtụ ihe ị ga-eme. Ọtụtụ oge, ọnụ ala roba nwere ike jupụta bọtịnụ ahụ gị iPhone. Gbalịa iwepu ikpe gị iPhone na ịpị bọtịnụ olu ọzọ.
Ọ bụrụ na ha ka na-jammed, eleghị anya ị ga-enwerịrị iPhone gị. Pịgharịa gaa na ala nke isiokwu a iji chọpụta nhọrọ nhicha bọtịnụ olu gị!
A Nwa Oge Idozi N'ihi Nọgidesiri Volume Button
Ọ bụrụ na bọtịnụ olu dị na ị nweghị ike idozi iPhone gị n'oge ọ bụla, ị nwere ike iji AssistiveTouch! AssistiveTouch na-etinye bọtịnụ mebere na ngosipụta nke iPhone gị nke nwere ọtụtụ ọrụ dị ka bọtịnụ anụ ahụ.
Iji gbanye AssistiveTouch, gaa na Ntọala -> Nweta -> Pịa -> AssistiveTouch . Gbanye mgba ọkụ na-esote AssistiveTouch - bọtịnụ mebere ga-apụta.
Iji AssistiveTouch dị ka bọtịnụ olu, pịa bọtịnụ mebere ma pịa Ngwaọrụ . You ga-ahụ nhọrọ iji dozie olu elu ma ọ bụ ala, dịka ị nwere ike ime na bọtịnụ olu arụ ọrụ!
Enwere m ike pịa bọtịnụ olu, mana ọ nweghị ihe na-eme!
Ọ bụrụ na ị ka nwere ike ịpị bọtịnụ olu, ị nwere ike ịbụ chioma! Ọ bụ ezie na ọ nweghị ihe ọ bụla na-eme mgbe ị pịa bọtịnụ olu, nke a nwere ike ịbụ nsonaazụ nke a ngwanrọ nsogbu . Soro nchọpụta nsogbu nzọụkwụ n'okpuru ịchọpụta na idozi ezigbo ihe mere gị iPhone olu mkpọchi na-adịghị arụ ọrụ!
O nwere ike ịbụ na ngwanrọ ahụ agbaghala, na-echedo iPhone gị. Yabụ, mgbe ịpịrị bọtịnụ olu dị na iPhone gị, ọ nweghị ihe mere. Site na ime nrụpụta siri ike, a ga-amanye iPhone gị ka ọ gbanyụọ ma laghachi azụ. Ihe nrụpụta siri ike ga-emeghe iPhone gị ma nwee olileanya idozi nsogbu bọtịnụ olu.
E nwere ụzọ ole na ole siri ike iji tọgharịa iPhone gị dabere na ụdị nke ị nwere:
iPhone 6s na mbụ : Pịa ma jide ike button na Home button n'otu oge ruo mgbe Apple logo na-egosi.
iPhone 7 & iPhone 7 gbakwunyere : N'otu oge pịa ma jide bọtịnụ ike na bọtịnụ olu ruo mgbe akara Apple gosipụtara.
iPhone 8, 8 gbakwunyere, na X : Pịa ma hapụ bọtịnụ olu elu, pịa ma hapụ bọtịnụ olu elu, wee pịa ma jide bọtịnụ n'akụkụ ruo mgbe akara Apple gosipụtara.
Gbanwee Mgbanwe na bọtịnụ
Ọ bụrụ na ị na-agbalị ịbawanye ma ọ bụ belata olu ụda na iPhone gị site na iji bọtịnụ olu, jide n'aka Gbanwee na bọtịnụ agbanwuru. Ọ bụrụ na ntọala a agbanyụrịrị, bọtịnụ olu ga-edozi olu maka ihe dịka egwu, pọdkastị, na vidiyo mgbe akpọpụtara site na ekweisi ma ọ bụ ndị na-ekwu okwu iPhone gị.
Gaa na Ntọala -> undsda & Haptics ma gbanye mgba ọkụ na-esote Change na bọtịnụ. ’Ll ga-amata na ọ dị mgbe mgba ọkụ na-acha akwụkwọ ndụ!
A DFU (ngwaọrụ femụwe update) weghachi bụ sikwa ele ụdị ụdị weghachi i nwere ike ịrụ na iPhone. 'F' na DFU weghachi na-anọchi anya femụwe , mmemme na iPhone gị nke na-achịkwa ngwaike ya. Ọ bụrụ na bọtịnụ olu adịghị arụ ọrụ, etinye gị iPhone na DFU mode nwere ike idozi nsogbu ahụ!
Idozi bọtịnụ Olu
Ọ bụrụ na bọtịnụ olu ka ga-arụ ọrụ mgbe ịmechara DFU weghachite, ọ ga-abụrịrị na ị ga-edozi iPhone gị. Na mbido iPhone, bọtịnụ olu agbaji adịghị oke nke nkwekọrịta n'ihi na ihe niile ha mere bụ ịhazi olu. Ugbu a, bọtịnụ olu dị mkpa karịa n'ihi na ejiri ha ka nseta ihuenyo na iPhone X ma sie ike tọgharịa iPhone 7, 8 na X.
Tọọ oge na Apple Store gị nso ma hụ ihe ha ga-emere gị. Anyị na-akwado Pulse , ụlọ ọrụ mmezi iphone nke na-eziga onye ọrụ akaebe edebere ozugbo n'ụlọ gị ma ọ bụ ụlọ ọrụ gị. Ha ga-edozi bọtịnụ olu agbajiri agbawa na ebe ahụ ma kpuchie mmezi ahụ na akwụkwọ ikike ndụ niile.
Igodo olu gị na-arụ ọrụ ọzọ! Oge ọzọ bọtịnụ olu iPhone gị anaghị arụ ọrụ, ị ga-ama ebe ị ga-abịa idozi nsogbu ahụ. Hapụ m ikwu n’okpuru ma mee ka m mara nke edoziziri nsogbu iPhone gị!